ခွင့်လွှတ်ပေးရတာတွေ နားလည်ပေးရတာတွေကြားမှာ ကျွန်မ ပင်ပန်းနေပါပြီ … – Shinyoon
ခွင့်လွှတ်ပေးရတာတွေ နားလည်ပေးရတာတွေကြားမှာ ကျွန်မ ပင်ပန်းနေပါပြီ …
အမှားတွေရှိလာတဲ့အခါ လူတိုင်းအမှားနဲ့တော့မကင်းနိုင်ပါဘူးလေဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကျွန်မ ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ဖူးတယ် အဲ့ဒီခွင့်လွတ်ခြင်းတွေအနောက်မှာ နောက်တစ်ကြိမ်တော့ထပ်ပြီး မမှားလောက်ပါဘူးဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေလဲ ထားခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့ …
မတူညီတဲ့အမှားတွေကို ခွင့်လွှတ်ပေးရတာဟာ သိပ်တော့မပင်ပန်းပါဘူး ဒါပေမယ့် တူညီတဲ့အမှားတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်နေတာကျတော့ ကိုယ့်အတွက် ပိုပြီးခံရခက်စေတယ် .. ဂရုစိုက်စရာမလိုတာလား မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုမှ ဘာကြောင့်ထပ်ခါခါလုပ်ချင်ရတာလဲပေါ့ …
နားလည်ပေးပါတဲ့ အမြဲတမ်း ဒီစကားလေးကိုသုံးတယ် ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်နားလည်ပေးနေတာလဲဆိုတဲ့ စိတ်ကိုကျတော့ မမြင်ကြဘူးလေ …ရှင်းရှင်းပြောရရင် သူတို့ကိုပဲ နားလည်ပေးစေချင်ကြတာ ကိုယ့်ကို နားလည်ဖို့ကျ ဘယ်တော့မှ မတွေးကြဘူးလေ …
အရင်ကကျတော့ တစ်နေ့ကျရင် ကိုယ့်ကိုလဲနားလည်ပေးမှာပါဆိုတဲ့ အတွေးရှိခဲ့ဖူးတယ် ခုတော့ ဝေေ၀ဝါးဝါးလေးတောင် မကျန်တော့ဘူးလေ သူဘယ်တော့မှ နားလည်ပေးလာမှာမဟုတ်မှန်းသိလာလို့ပေါ့ … ဒါဆို ကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့နားလည်မှုတွေက ဘာအတွက်လည်း အဖြေရှာကြည့်တယ် အဖြေမတွေ့ရဘူး ….
ကိုယ်တွေ့လာရတာ မြင်လာရတာဆိုလို့သူ့ကို ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်တယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်မှားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ အတ္တတွေ သူ့ကို နားလည်ပေးရမယ် သူကတော့ ဘယ်တော့မှ နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုတွေပဲ တွေ့လာရတယ်
တကယ်ဆို .. ကိုယ်ကချည်း နားလည်ပေးရ ခွင့်လွှတ်ပေးရတဲ့ ရပ်ဝန်းမှာ ကျွန်မနေထိုင်နေရတာ တော်တော်လေးကို ပင်ပန်းလာပါပြီ …
ခြင့္လႊတ္ေပးရတာေတြ နားလည္ေပးရတာေတြၾကားမွာ ကြ်န္မ ပင္ပန္းေနပါျပီ …
အမွားေတြရွိလာတဲ့အခါ လူတိုင္းအမွားနဲ႕ေတာ့မကင္းနုိင္ပါဘူးေလဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႕ ကြ်န္မ ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့ဖူးတယ္ အဲ့ဒီခြင့္လြတ္ျခင္းေတြအေနာက္မွာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေတာ့ထပ္ျပီး မမွားေလာက္ပါဘူးဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးေတြလဲ ထားခဲ့ဖူးတယ္ေပါ့ …
မတူညီတဲ့အမွားေတြကို ခြင့္လႊတ္ေပးရတာဟာ သိပ္ေတာ့မပင္ပန္းပါဘူး ဒါေပမယ့္ တူညီတဲ့အမွားေတြကို ထပ္ခါထပ္ခါျပဳလုပ္ေနတာက်ေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ ပိုျပီးခံရခက္ေစတယ္ .. ဂရုစုိက္စရာမလုိတာလား မၾကိဳက္ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုမွ ဘာေၾကာင့္ထပ္ခါခါလုပ္ခ်င္ရတာလဲေပါ့ …
နားလည္ေပးပါတဲ့ အျမဲတမ္း ဒီစကားေလးကိုသံုးတယ္ ဒါေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္နားလည္ေပးေနတာလဲဆုိတဲ့ စိတ္ကိုက်ေတာ့ မျမင္ၾကဘူးေလ …ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ သူတို့ကိုပဲ နားလည္ေပးေစခ်င္ၾကတာ ကိုယ့္ကို နားလည္ဖို့က် ဘယ္ေတာ့မွ မေတြးၾကဘူးေလ …
အရင္ကက်ေတာ့ တစ္ေန့က်ရင္ ကုိယ့္ကိုလဲနားလည္ေပးမွာပါဆုိတဲ့ အေတြးရွိခဲ့ဖူးတယ္ ခုေတာ့ ေ၀ေ၀၀ါး၀ါးေလးေတာင္ မက်န္ေတာ့ဘူးေလ သူဘယ္ေတာ့မွ နားလည္ေပးလာမွာမဟုတ္မွန္းသိလာလုိ့ေပါ့ … ဒါဆို ကိုယ္ေပးခဲ့တဲ့နားလည္မႈေတြက ဘာအတြက္လည္း အေျဖရွာၾကည့္တယ္ အေျဖမေတြ့ရဘူး ….
ကိုယ္ေတြ့လာရတာ ျမင္လာရတာဆိုလို ့သူ့ကို ခြင့္လႊတ္ေပးေစခ်င္တယ္ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္မွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ အတၱေတြ သူ့ကို နားလည္ေပးရမယ္ သူကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ နားလည္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈေတြပဲ ေတြ့လာရတယ္
တကယ္ဆို .. ကို္ယ္ကခ်ည္း နားလည္ေပးရ ခြင့္လႊတ္ေပးရတဲ့ ရပ္၀န္္းမွာ ကြ်န္မေနထိုင္ေနရတာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ပင္ပန္းလာပါျပီ …